उस्तै छ, बालविवाह ! – Himal FM 90.2 MHz
उस्तै छ, बालविवाह !
बिचार – बिमर्श adminhimal August 12, 2018
माहाकुलुङकी सीता कुलुङ अहिले उमेरले २३ बर्ष पुगिन् तर विवाह भने १६ बर्षको कलिलो उमेरमा गरेकी हुन् । एक छोरा एक छोरीको आमा बनेकी कुलुङले १६ बर्षकै उमेरमै पहिलो सन्तान जन्माएकी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिलो सन्तान म संग छैन् । उमेरकै कारणले पेटमै बच्चा मरेको थियो ! बालविवाहले आफ्नै स्वास्थ्यमा समेत असर पार्छ भन्ने थाहै थिएन ।’ अहिले बुद्धि फिराएकी सीताले उमेर नपुगी विवाह नगर्न र नगराउन आग्रह गर्छिन् ।
सीता कुलुङ एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । माहाकुलुङमा बालविवाह निकै पातलिएको भनिएपनि भित्री पाटो केलाउदा सानै उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या बाक्लो भेटिन्छन् । कानुनले बालविवाहलाई सामाजिक अपराधकै रुपमा लिएपनि विभिन्न कारणले बालविवाहमा कमी आउन नसकेको हो । सानै उमेरमा हुने विवाहले विवाह/जन्म दर्तामा समेत समस्या ल्याएको जनप्रतिनिधिको भोगाई छ ।
वडा नं ४ गुदेलका अध्यक्ष जयकुविर कुलुङले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । उनले भने, ‘समाजमा बालविवाह कम होस् भन्नकै लागि चालु आर्थिक बर्षमा चेतनामूलक सडक नाटक प्रर्दशन गर्ने तयारी गरेका छौ ।’ अध्यक्ष जयकुविरले सानै उमेरको विवाह र प्रजननले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका बारेमा जानकारी दिलाएपछि बालविवाहमा कमी आउने आशा राखे ।
माहाकुलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विपना कुलुङले बालविवाह विकृतीको रुपमै फैलिएको बताउछिन् । उनी भन्छिन्, ‘विवाहबारे विद्यालय स्तरवाटै शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ । यो समस्याबारे पालिका पनि संवेदनशील बन्नेछ ।’ उपाध्यक्ष विपनाले बालविवाह बढ्नुमा गरिबी र चेतना अभाव संगै सञ्चार माथीको पहूँच र दुरुपयोगले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको बताईन् ।
साविकको गुदेल गाविस (हालको माहाकुलुङ गाउँपालिका क्षेत्र)मा बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि भन्दै सर्वेक्षण पनि गरियो तर त्यस कार्यले पुर्णता भने पाएन । सो क्षेत्रमा बालविवाह मात्र होईन, जन्मान्तरमा समस्या रहेको स्थानीय अगुवाहरु बताउछन् । जन्मान्तर नभएकै कारण बालबालिकाको पालन पोषणमा मात्र होईन, आमाको स्वास्थ्य समेत खतरा पर्दै गएको स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक हरि प्रसाद आचार्यले बताए ।